१८% बढी खुद नाफा गरेको लक्ष्मी बैंकको वितरणयोग्य नाफा ८४ करोडभन्दा बढी
वैशाख १५, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म लक्ष्मी बैंकले रू. १ अर्ब २८ करोड ८० लाख ८४ हजार खुद नाफा गरेको छ । गत वर्ष यो अवधिसम्म कम्पनीले रू. १ अर्ब ८ करोड ९९ लाख ७७ हजार यो नाफा गरेको थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको खुद नाफा १८ दशमलव १८ प्रतिशत बढी भएको हो ।
गत वर्षसम्म रू. ४१ करोड १ लाख ९ हजार ऋणात्मक रहेको कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा यस वर्ष रू. ८४ करोड ७६ लाख ३९ हजार रहेको छ । सञ्चालन नाफा भने गत वर्षभन्दा यस वर्ष १५ दशमलव ६९ प्रतिशत बढी रू. १ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख ९४ हजार भएको छ ।
गत वर्षको तुलनामा ८ दशमलव ३८ प्रतिशत बढी रू. १ खर्ब ६ अर्ब ६१ करोड ७९ लाख १६ हजार निक्षेप संकलन गरेको कम्पनीले १६ दशमलव २८ प्रतिशत बढी रू. १ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड ५४ लाख ४३ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
यस वर्ष ९ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १० अर्ब ६९ करोड ५६ लाख ९० हजार पुगेको छ । जगेडा कोष रकम गत वर्षभन्दा ३३ दशमलव ६७ प्रतिशत बढी रू. ५ अर्ब ५६ करोड ४२ लाख १० हजार कायम भएको छ ।
गत वर्ष १ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात यस वर्ष शून्य दशमलव ७१ प्रतिशतमा झरेको छ । तेस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. १६ दशमलव शून्य ६ रहेको छ ।